Two Weeks (2013) မြန်မာစာတန်းထိုး - ရွှေရုပ်ရှင်
Myanmar Subtitles Movies
Two Weeks (2013) မြန်မာစာတန်းထိုး
ပျိုမေတို့အသည်းစွဲ လီဂျွန်ကီရဲ့ လှုပ်လှုပ်ရှားရှား ၂၀၁၃ ခုနှစ်က ဇာတ်လမ်းတွဲလေးဖြစ်ပါတယ်။ ထယ်ဆန်းဟာ လူဆိုးဂိုဏ်းတစ်ခုမှာပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့လူတစ်ယောက်ပါ။ အင်ဟေးဆိုတဲ့အမျိုးသမီးလေးနဲ့ချစ်ကျွမ်းဝင်ခဲ့ပြီး သူမကိုယ်ဝန်ရှိလာတဲ့အချိန်မှာပဲ အခြားလူတစ်ယောက်
သတ်ထားတဲ့ လူသတ်မှုကို သူက ကိုယ်စားဝင်ခံရဖို့အခြေအနေတစ်ခုကြုံတွေ့လာရပါတယ်။ လူသတ်မှုကို သူကိုယ်စားအပြစ်မခံယူခဲ့ရင် အင်ဟေးကို သတ်ပစ်မယ်ဆိုတဲ့ခြိမ်းခြောက်မှုနဲ့ပါ။ ဒီလိုနဲ့ သူထောင်ကလွတ်လာတဲ့အခါ သူ့မှာသမီးလေးရှိနေခဲ့ပြီး သမီးလေးမှာ သွေးကင်ဆာရောဂါ
ခံစားနေရတာကိုသိလိုက်ရတဲ့အခါ ရိုးတွင်းခြင်ဆီအစားထိုးကုသဖို့ အချိန်နှစ်ပတ်ပဲကျန်ပါတော့တယ်။ အဲဒီအချိန်မှာပဲ သူဟာ လူသတ်မှုတစ်ခုနဲ့ထပ်မံအဖမ်းခံလိုက်ရတဲ့အခါမှာတော့...
အခုနောက်ပိုင်း သုံးပွင့်လေးပွင့်ဆိုင်တွေထပ်လာချိန်မှာ ဒီကားလေးကိုပြန်ကြည့်သင့်တဲ့စာရင်းထဲထည့်ကြည့်သင့်တယ်လို့ထင်ပါတယ်။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာတွေ၊ အသက်လုရုန်းကန်လှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့ ဇာတ်အိမ်အချိုးအပြောင်းတွေကြောင့်
Translate by: Star Let
Reviewed by:Scarlet Phoenix
Encoded by: Sinn Sinn
Episode 16 Final Episode
GC က​ဆေးထိုးပြီးadminကျ​နော်​မှာ16ပိုင်းစား​ဘေးမကျန်း​တော့ဘူးဟ​အေးပါကွာ...GC ရာ♥ ♥ ♥
soe thet oo
two weeks က 14,15,16 လင့်ပျက်နေလို့ ပြန်ချိတ်ပေးပါဦးဗျာ
2015 ရဲ့ အကောင်းဆုံး 18+ ကား(သို့မဟုတ်) Love (2015)
18+ ထက်ပိုပြီး နူ့ညံသောကြမ်းတမ်းခြင်းများဖြင့် ထုံးမွှမ်းထားလို့ 21+ လို့သာ Rating ပေးပရစေ။ ပြင်းပြတဲ့လိင်စိတိကို ချုပ်တီထားရတဲ့ Mur...
In the Realm of The Senses (21+) မြန်မာစာတန်းထိုး
In the Realm of The Senses (21+) မြန်မာစာတန်းထိုး Rating က 21+ ဆိုတော့ ဘယ်လိုတမူထူးခြားတဲ့ကားဆိုတာတော့ ညွန်းဆိုစရာလိုမယ်မထင်ပါဘူး.။ 21+ ဇ...
The K2 (2016) မြန်မာစာတန်းထိုး
The K2 (2016) မြန်မာစာတန်းထိုး တောင်ကိုရီးယား တစ်နိုင်ငံလုံးနီးပါးကို ကွန်ရက်ဖြန့်ကြက်ထားသည့် tvN ရုပ်သံလိုင်းမှ ထုတ်လွှင့်ပြသခဲ့တဲ့ T...
A Frozen Flower (2008) (18+) မြန်မာစာတန်းထိုး
A Frozen Flower (2008) (18+) မြန်မာစာတန်းထိုး Imdb Rating -7.2/10 ယူအန်(ဂျပန်)ပြည်ထောင်စုလက်အောက် ကျရောက်ခဲ့ရတဲ့ ဂေါယို(ကိုရီး...
Moon Lovers: Scarlet Heart Ryeo (2016) မြန်မာစာတန်းထိုး
Moon Lovers: Scarlet Heart Ryeo (2016) မြန်မာစာတန်းထိုး K drama တွေထဲ နောက်ဆုံးထွက်ရှိလာပြီး ခေတ်နှစ်ခုကြားက မိန်းမပျိုလေးနဲ့ ဂို...
Let's fight Ghost (2016) Korea Series မြန်မာစာတန်းထိုး
ပရိသတ်​​တောင်းဆိုမှု အများဆုံးဇာတ်​လမ်းတွဲတစ်​ခုအဖြစ် W. Doctor ,UF စတာတွေနဲ့ တပြေးတည်းလိုက်နေတဲ့ let's fight ghost (2016) ကို မြ...
Legend of Blue Sea (2016) Korean TV Series မြန်မာစာတန်းထိုး
မြန်မာစာတန်းထိုး ကိုရီးယားဒရမ်မာချစ်သူအားလုံးစောင့်မျှော်နေကြတဲ့ မင်းသားလီမင်းဟိုနဲ့ မင်းသမီး ဂျွန်ဂျီယောင်းတို့ရဲ့ ဟာသဇာတ်မြူးအချစ်ဇာ...
Watchmen (2009) မြန်မာစာတန်းထိုး
Imdb Rating : 7.7/10 Iron Man ,Avenger အစရှိတဲ့ Superhero ရုပ်ရှင်တွေမပေါ်ခင်က Epic အဖြစ်ဆုံး Superhero ရုပ်ရှင်တစ်ကားကို ဖေါ်ပြပါဆိုရင် 2009 ...
Pinocchio Korea TV Series (မြန်မာစာတန်းထိုး) အစအဆုံး
ကဲ GC ပရိသတ်ကြီးရေ.. အခုနောက်ထပ် Korean Seriesးလေးတစ်ခု တင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ရှင့် ပရိသတ်ကြီးရဲ့ အသည်းကျော်မင်းသားလေး W- Two worlds ကမင်းသားလေ...
Viking Legacy (2016) မြန်မာစာတန်းထိုး
မင်္ဂလာပါနံနက်ခင်းပါခင်ဗျာ၊ September 2016 မှာထွက်ရှိခဲ့တဲ့ Viking Legacy ဆိုတဲ့ Adventure Movie တစ်ခုကို up-to-date အနေနဲ့ တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ...
Copyright © 2011. ရွှေရုပ်ရှင် - All Rights Reserved